Eurovision 2022 - Kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan ​​| Bezzia
Susana godoy | 10/05/2022 14:00 | Wararka
Wax aad u yar ayaa hadhay in la ogaado Yaa lagu dhawaaqi doonaa inuu ku guuleystay Eurovision 2022?. Qamaarka ayaa horeyba loo sameeyay waana run inay yihiin saadaalin kaliya, laakiin khubarada ayaa horeyba u heysta tiro badan oo ah kuwa ugu cadcad oo ay ku arkaan kuwa ugu horreeya liiska. Dabcan, ka dib, inta u dhaxaysa xeerbeegtida iyo codka dadweynaha, wax walbaa way isbedeli karaan.
Horay waxaan ku bilaabaynaa semi-finalka, laakiin waa run inay jiraan tiro dalal ah oo aan la taaban karin oo ah kuwa soo gala waxa loogu yeero. 'Weyn 5'. Kuwaan waa kuwa aan mar dambe dhaafi doonin semi-finalka, laakiin si toos ah u aadaya finalka. Waxaa ka mid ah waxay u muuqataa inay sidoo kale jiraan kuwa ugu cadcad inay qaataan abaalmarinta. Ma rabtaa inaad ogaato waxa uu yahay?
1 Kuwa ugu cadcad ku guuleysiga Eurovision 2022: Ukraine
2 Talyaanigu waa mar kale mid ka mid ah kuwa ugu cadcad
3 Kaalinta seddexaad waxaa ku jira Iswiidhan
4 Sam Ryder ee UK
5 Spain ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa ugu cadcad
Kuwa ugu cadcad ku guuleysiga Eurovision 2022: Ukraine
Waxay u muuqataa in mid ka mid ah kuwa ugu cadcad, oo horeyba ugu jiray kaalinta koowaad ee buug-bixiyeyaasha, waa Ukraine. Soo jeedintu waxay ka timid kooxda Kalush Orchestra. Dhexdeeda waxaan ka heli karnaa noocyo kala duwan oo rap ah, iyo sidoo kale burushyada dadka iyo kuwa lagu daro pop. Horeba sannadkii hore Ukraine waxay qaadatay kaalinta shanaad waxayna u muuqataa in sanadkan uu u socdo dhammaan. Dhawaaqyadaas isku dhafka ah ee la isku dhafay ayaa mahad iska leh, waxayna noqdeen kuwii labaad ee ugu cod badnaa ee ay dadweynuhu u codeeyeen inay dalkooda matalaan. Ku guuleystaha waxa ay aheyd Alina Pash, laakiin muran ka dhashay awgeed waxa ay uga hartay tartanka. Sidaa darteed, Kalush Orchestra waxay la yimaadeen rajooyinkooda tartanka waxayna u muuqataa in hadda, ay gacanta sare leeyihiin.
Talyaanigu waa mar kale mid ka mid ah kuwa ugu cadcad
In kasta oo ay kaalinta koowaad galeen sannadkii hore, iyada oo ay ugu wacan tahay hal-abuurnimada iyo kartida Maneskin, sannadkan waxa ay u muuqdaan kuwo mar kale xoog badan. Sida Buug-sameeyayaasha Talyaanigu wuxuu ku jiraa kaalinta labaad ee ugu cadcad. Markaa, waa in aan sugno ilaa Sabtida si aan u aragno in xeerbeegtida iyo dadweynuhu ay runtii isku mid yihiin. Waqtigan xaadirka ah waxaan ognahay in waxqabadka uu mas'uul ka yahay Mahmood & Blanco, oo keena balad loo yaqaan 'Brividi'. Waa run in malaha Mahmood uu kuula muuqdaa mid aad taqaan, sababtoo ah waxa uu 2019 hore ugu guulaystay heestaas la magac baxday ‘Soldi’. Aynu eegno in uu leeyahay xaalad la mid ah tii saddex sano ka hor.
Kaalinta seddexaad waxaa ku jira Iswiidhan
Weli waa inaan sugnaa si aan u aragno waxa dhacaya usbuucan, laakiin shaki la'aan, Sweden waa sharadka kale ee weyn. In ka badan wax kasta sababtoo ah waxay isu dhigtay booska saddexaad marka aan ka hadalno barkadaha Eurovision. Qofka mas'uulka ka ah in uu masraxa soo fuulo waa Cornelia Jakobs oo wadata heesta 'Igu dhowow', kaas oo u muuqda inuu ku bilaabmayo mid aad u aamusan, laakiin leh taabashada xafladda taas oo aad jeceshahay. Eurovision Song Contest 2022 kuma cusba Cornelia sababtoo ah waxay horay ugu jirtay 2011 iyo 2012. Miyay ku qaadan doontaa guriga markan guusha?
Sam Ryder ee UK
Waxay u muuqataa in Boqortooyada Midowday ay si cad u ahayd markii ay dooranaysay Saint Ryder musharaxa ay ugu jeceshahay. Waxaa laga yaabaa in ay aad ugu badan tahay adiga, sababtoo ah codkiisu wuxuu ku wareegay adduunka oo dhan. Maadaama Sam uu aad caan uga yahay shabakadaha bulshada sida Tik Tok. Tarjumaadda qaybo ka mid ah heesaha caanka ah, wuxuu qabsaday quluub badan, mana aha wax yar. Waxay leedahay in ka badan 12 milyan oo raacsan iyo kumanaan jecel taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad. Heestiisa 'Space Man' waxay u soo baxaysaa sidii xumbo dhex musharraxiinta ah, markaa waa inaan sugno maalmo yar si aan u ogaanno doorashada ugu dambeysa.
Spain ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa ugu cadcad
Had iyo jeer waxaa jira fikrado loogu talagalay dhammaan dhadhanka, laakiin waxay u muuqataa in Spain ay sidoo kale kor u kacday inay ka mid noqoto 5-ta heeso ee la jecel yahay iyo bandhigyada khamaarka. Chanel waxay ku siinaysaa wax walba masraxa iyo tamartaas mar walba waa la kala qaadaa. Waxay u muuqataa in 'SloMo' Waxay ku soo socotaa si aad u xoog badan oo ay sii dheer tahay in ay mar hore dib u taabtay lebbiska iyo qoob ka ciyaarka, waxa hubaal ah in ay soo bandhigto bandhiga ilaa saamiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan ​​Eurovision 2022
Heerkulka ugu habboon qaboojiyaha iyo qaboojiyaha